Myat Shu - 2013 June
You are here : Myat Shu » Archives for June 2013
(၁) လူသတ္တ၀ါဆိုတာ တစ်နေ့ တစ်နေ့ ပြောတဲ့စကားတွေ များချင်မှ များမယ်၊ လုပ်တဲ့အလုပ်တွေ များချင်မှ များမယ်။ ဒါပေမယ့် တွေးတဲ့အတွေးကတော့ မိုးလင်းအိပ်ရာထကနေ ညအိပ်ရာဝင်အထိ မဆုံးနိုင်အောင်ကို တရစပ်တွေးမိနေတတ်တယ်။ မြင်ရင်မြင်တယ်လို့ မှတ်၊ ကြားရင်ကြားတယ်လို့ မှတ်ဆိုသလို ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရဲ့ သြ၀ါဒကို အပ္ပမာဒေန သမ္မာဒေထ မလုပ်နိုင်တော့လည်း အတွေးနောက်မှာ ဇောတွေ၊ စေတသိတ်တွေ ကပ်ပါကုန်ရော။ တွေးတဲ့အထဲမှာ ပုဂ္ဂိုလ်ဆန်တဲ့အတွေးပါသလို ဥာဏ်ပိစိနဲ့ အဆာကျယ်ချင်တဲ့ တိုင်းရေးပြည်ရေးအကြောင်းတွေလည်း ပါတယ်။ (၂) ပထမဆုံးတွေးမိတာက စာရေးသူ မနက်တိုင်း ရန်ကုန်မြို့၊ ပြည်လမ်းပေါ်က ဖြတ်တိုင်း တွေးမိတဲ့အတွေးပါ။ ရန်ကုန်မြို့တော် စည်ပင်သာယာရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် မနက် (၈) နာရီဝန်းကျင်ဆိုရင် ပြည်လမ်းတလျှောက် ၀ဲယာ ဘယ်ဘက်ကြည့်ကြည့် အမှိုက်တစ်စမရှိ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, June 18th 2013. Under မျက်ရှု, ရသ, အက်ဆေး
အပြင်ဘက်တွင် မိုးက စွေနိုင်လွန်းလှသည်။ မိုးရက်ဆက်ရွာနေသည်မှာ တစ်ပတ်ကျော်ခဲ့ပြီ။ အရင့်အရင်နေ့ရက်တွေတုန်းကတော့ မိုးရေစက်များသည် ကျွန်မကို အမှတ်တမဲ့သာ ကျော်ဖြတ်သွားခဲ့ကြ၏။ မိုးတွင်းမို့ မိုးရွာတာပဲဆိုတာကလွဲပြီး ကျွန်မက ကဗျာဆန်ဆန် တွေးနေတတ်သူမဟုတ်။ ကော်ဖီတစ်ခွက်နှင့် မိုးစက်ကို ငေးဖို့ရာ ဘ၀က အခွင့်မပေး။ ကျွန်မသည် နံနက်ခင်းများတွင် မိုးထဲရေထဲကပင် ဖြတ်လျက် ရုံးသို့ သွားရသည်။ ညနေ ရုံးဆင်းချိန်တွင်လည်း မိုးရွာနေဆဲဖြစ်သည်မို့ ထီးကိုပင် ခိုကိုးကာ အိမ်ပြန်ရပြန်သည်။ မိုးရေထဲ လမ်းလျှောက်ရတာ ပျော်စရာပဲဆိုသည်မှာ အတိတ်က ကျောင်းသားဘ၀ကသာ ပြော၍ကောင်းသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ သည်အသက်အရွယ်တွင်တော့ မိုးရွာခြင်းသည် ရာသီဥတုကို အနည်းငယ် သင့်တင့်စေသည်ဟု ကျေးဇူးတင်ခြင်းကလွဲ၍ ကဗျာမဆန်တတ်တော့ပါပြီ။ သည်ရက်ပိုင်း မိုးစွေနေသည်ကို စိတ်ပျက်ခြင်းလည်း မရှိ၊ နှစ်သက်ခြင်းရယ်လို့လည်းမရှိဘဲ အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့ ကျော်ဖြတ်နေခဲ့သော ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Tuesday, June 11th 2013. Under အက်ဆေး
www.associatestorsandtravel.com (၁) မေမေ၊ မာမား၊ မာတာ၊ မို့အို၊ အိုမား၊ မာမီ၊ မာသာ...မ တွေကြောင့်မိခင်ကို မြင့်မိုရ်နှင့် နှိုင်းခဲ့လေသလားဟု ကျွန်တော်တွေးမိပါသည်။ သည်လိုဆိုလျှင် ဖေဖေ၊ ပါပါး၊ ပီတာ၊ ဖအို၊ အပါး၊ ဖာသာ....ပ၊ဖ တွေကြောင့် ဖခင်ကိုနှိုင်းရမည့် ဝေါဟာရတစ်ခုကို ရှာဖွေဖို့ လိုပါလိမ့်မည်။ သည်ဝေါဟာရသည် ပ (သို့မဟုတ်) ဖ ပါရမည်။ကြီးမြတ်သော ပုံရိပ်ရှိရမည်။ ဒါမှလည်း မြင့်မိုရ်ကို ယှဉ်နိုင်မည်မဟုတ်လား။ ကျွန်တော် စဉ်းစားရပါပြီ။ ဦးနှောက်နှင့်သာမက နှလုံးသားနှင့်ပါ စဉ်းစားရပါသည်။ ဖခင်ဆိုသည့် ကြီးမြတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်အား သေးနုတ်သော၊ ပျပ်ဝပ်သော၊ နုံချာသော၊ မှိန်ဖျော့သော၊ ခြောက်သွေ့သော၊ အမည်နာမဖြင့် မနှိုင်းစေရအောင် ခေါင်းမီးတောက်မတတ် ကျွန်တော် စဉ်းစားရပါသည်။ ... Continue Reading
Published By Myat Shu On Saturday, June 8th 2013. Under ၀တ္ထု, မျက်ရှု, ရသ
ဂရိဒဏ္ဍာရီ အလိုမူကား အခါတစ်ပါး၌ ဖန်ဆင်းရှင် နတ်ဘုရင်ကြီး “ဇု” (Zeus) သည် ဗိသုကာနတ်မင်း “ဟီဖားစတပ်” (Hephaestus) ကို သမီးတော်တစ်ပါး ဖန်ဆင်းပေးရန် စေခိုင်းတော်မူပြီး၊ ဖွားမြင်ရရှိလာသည့် သတို့သမီးငယ်ကို “ပန်ဒိုရာ” ဟု အမည်ပေးကာ သမီးအဖြစ် မွေးစားတော်မူလေသည် ဟူသတတ်။ “ပန်ဒိုရာ” သတို့သမီးငယ်သည် အလှနတ်ဘုရားမ “အာဖရိုဒိုက်တိ” (Aphrodite) ၏ စောင်မမှုကြောင့် အဆင်းလှ၏။ နတ်တမန်တော် “ဟားမိစ်” (Hermes) ၏ ပြုစုမှုကြောင့် နှုတ်ရေးနှုတ်ရာ သွက်လက် ချက်ချာ၏။ စစ်မက်နှင့် ဉာဏ်ပညာ နတ်ဘုရားမ “အသီးနာ” (Athena) ၏ ကြည့်ရှုမှုကြောင့် ညဏ်ပညာနှင့်လည်း ပြည့်စုံလေ၏။